Makeup ဘယ်ကစ | yathar Magazine
ဒီဇင်ဘာ 4, 2020
မိတ်ကပ် ဘယ်ကစလဲဆိုတာ သိကြလား? အခုခေတ်မှာ မိန်းကလေးတိုင်း နေ့စက်အသုံးပြုနေကြတဲ့ မိတ်ကပ်ကို ဘယ်နှခုနှစ်တွေလောက်ကတည်းက စပြီးတော့ လိမ်းခြယ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်မလဲ?
မိတ်ကပ်ကို လိမ်းခြယ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ အီဂျစ်ခေတ်ကတည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်ခေတ်ကလူတွေ သေရင် သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုပါ ထည့်ပြီးတော့ ဂူသွင်းပေးတာကြောင့် အီဂျစ်သင်္ချိုင်းတွေထဲကနေ အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကလီယိုပက်ထရာရဲ့ အုတ်ဂူထဲမှာတော့ ပိတုန်းကောင်တွေကို အမှုန့်ခြေပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီခေတ်ရဲ့ သာမန်မိန်းမတွေကတော့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးအနေနဲ့ မြေနီကို ရေဖျော်ပြီး အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအထောက်အထားတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို အီဂျစ်ခေတ်ကတည်းက စတင်အသုံးပြုနေကြပြီဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သိသာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးမရွေး ဆိုးကြတဲ့ Kohl လို့ခေါ်တဲ့ အိုင်းလိုင်နာဆိုးကြတာပါပဲ။ ဒီ kohl ကို သဲ, ခဲ, ကြေးနီ, ပြာနဲ့ အယ်လ်မွန်သီးမီးကျွမ်းအောင် ဖုတ်ထားတာတွေကို ရောပြီးတော့ ပြုလုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအိုင်းလိုင်နာကို ဆိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ ဝိညာဥ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်နေတယ်လို့လည်း ဆိုကြသလို သဲကန္တာရရဲ့ ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင် အသုံးပြုကြတယ်လို့လည်း ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာ ရောဂါပိုးတွေမဝင်အောင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ အိုင်းလိုင်နာကို ဆိုးခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ kohl မှာပါတဲ့ ခဲဓာတ်က ဘတ်တီးရီးယားတွေကို သေစေနိုင်တဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာကြာသုံးစွဲရင် kohl မှာ ပါဝင်တဲ့ ခဲဓာတ်ကြောင့် ခဲဆိပ်သင့်ပြီး လူကို အသက်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ရှေးခေတ်ဂရိတွေနဲ့ ရောမလူမျိုးတွေက ကျောက်တုံးတွေနဲ့ သတ္ထုတွေကို ညက်ညက်ကျေအောင် ထောင်းပြီးတော့ လိမ်းဆင်ခြယ်သခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ မိတ်ကပ်တွေက အရောင်အသွေး မစုံလင်ခဲ့ပါဘူး။
ဥရောပရဲ့ အလယ်ခေတ်လောက်မှာတော့ အသားဖြူတာကို ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုလို့ မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ခေတ်က မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဒဏ်ရာအရခံ သွေးထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တောင် ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံတွေက တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးတော့ ၂၀ ရာစုနှစ်အစမှာ အခုခေတ်အသုံးပြုလာတဲ့ အမှုန့်ပုံစံတွေကို စတင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
Sagittarius ဖွားလေးတွေ ဘာတွေရှောင်သင့်လဲ